Wararka Maanta – Page 3 – Filimside.net
Cajiib badanaa filimka F2 – Fun and Frustration oo Blockbuster noqday Tollywood isagaa qabsaday
January 19, 2019 Zakarie Abdi
Lama filaan aan caadi ahayn ayaa ka dhacay dhul weynaha Telugu shirkadooda ka jirto Tollywood madaama filimka F2 – Fun and Frustration Blockbuster weyn noqday halka Ram Charan filimkiisii Vinaya Vidheya Rama iyo Balakrishna filimkiisa NTR Kathanayakudu ay ganacsi ahaan fashilmeen […]
Marka Ay Dhacday Shah Rukh Khan Inuu Akshay Kumar Ku Tilmaamo Ilmo Yar Ama Cunug!
January 19, 2019 Ali Aadan
Super Stars kala ha Shah Rukh Khan iyo Akshay Kumar waa shaqsiyaad xushmad isku hayaan nolosha dhabta ah saaxibona ah. Sido kale waxaan wada ognahay inee wada shaqeyn dhexmartay xidigahan ayago kasoo wada muuqdeen […]
Ma Ogtahay Mega Star Salman khan 5 Film Oo Waaweyn Inuu Sameyay Ilaa Hadana La Daawanin (+Sawiro)
Mega Star Salman Khana ayaa dhex dabaalanaya guushisa iyo awoodisa oo Box-officeka kusii balaaratay kadib markii uu sameyay Blockbuster-ki udambeyay ee TZH inkastoo Race 3 ka fashilmay hadana waa mid guulestay. Salman sanadkaan waxaa […]
8 Atirisho Oo Bollywoodka Ugu Gaa Gaaban (Short Girls) Alia Bhatt Iyo Shraddha Kapoor Ayaa Kujiraan (+Sawiro)
Waxaan Maalmo kahor idiin la wadaagnay maqaal aan oga hadleynay atirishooyinka Bollywoodka iyo kuwooda ugu dhaa dheer. Haatana waxaan idiin heynaa atirishooyinka Bollywoodka iyo kuwooda ugu gaa gaaban ee gaabni darted mararka qaar atoorayaasha […]
Kusoo Dhowaada Heeska Calaacalka Ah Ee “Mubarak Mubarak” Oo Turjuman (+Video)
Kusoo dhowaad barnaamijii turjumida heesaha waxaana caawa idiin heynaa heeska caanka ah misane calaacalka ah ee Mubarak Mubarak oo hada kahor aan idiin la wadaagnay ayadoo turjuman. Balse maanta maadama ay ku beegneyd xiligii la […]
Waxaa Maanta Oo Kale La Daawaday Filmka Kajol Labada Waji Ku Jishay Ee Kuch Khatti Kuch Meethi
Kuch Khatti Kuch Meethi oo micno ahaan mida ugu dhow ah (xoogaa dhanaan, xoogaa macaan) ayaa maanta oo kale la daawaday waxaana hogaamiye ka ahed Kajol Devgan. Filmkaan Kajol waxay ku jishay labo waji amaan […]
19 Atoore Ee Bollywoodka Katirsan Kuwaaso Director Caawiye Soo Noqdeen Qeybtii 3aad (+Sawiro)
Atoorayaasha Bollywoodka shaqooyin kala duwan aye soo qabteen kahor inta aysan soo galin qeybta jilista atoorinimo. Waxaan idiin heynaa 19 atoore ee Bollywoodka katirsan kuwaaso hada kahor soo noqdeen Directorcaawiye (Assistant Director) kahor inta aysan […]
Waa Tuma Bhagyashree Atirishada Filmka Maine Pyar Kiya Wax Ka Ogow Nolosheeda!!
Bhagyashree waa atirisho India kasoo jeeda taaso dhalatay 23 Febraayo 1969 waa 50 jir kaliya hal bil oo kale ayaa oga dhiman inee 50 sano jirsato waxay caan ku tahay doorkeda filmka Maine Pyar Kiya. […]
Dhageyso barnaamijka Filimside Friday xalqadii ugu dambeesay oo xiiso badneyd
Barnaamijka Filimside Friday oo ah mid xiiso badan kana baxo Jimco walbo Idaacada Ciyaaraha FM (103 Mhz) waa mid ku saleesan macluumaadka shabakada Filimside lagu qoro todobaad walbo ayagoo diyaarsan oo maqal ah. Haddaba Filimside […]
Ruug cadaagii soo rogaal celi: Suniel Shetty oo duubis ku bilaabay filimka weyn Marakkar
Bollywood Action Hero Suniel Shetty oo 57-jir ah ayaa shaashada dib ugu soo laabtay wuxuuna markaan duubis rasmi ah ku bilaabay filimka weyn ee Koonfur Hindiya laga leeyahay gaar ahaan reer Malayalam shirkadooda Mollywood laguna […]
« 1 2 3 4 … 1,428 »